Saturday, 17 March 2012 14:39	नागरिक
किशोर नेपाल- 'हरेक सिगरेटको एउटा टुप्पोमा आगो हुन्छ भने त्यसको अर्को टुप्पो मूर्ख मानिसको मुखमा हुन्छ' रेष्टुराँमा सुनेको यो डायलग रायनालाई निकै मन पर्‍यो। उसले डायलग बोल्नेको अनुहारमा हेरी। एउटा केटो मस्तसँग चुरोटको धुवाँ उडाउँदै र हाँस्दै थियो। रायना थिई नेपालगन्जको सिद्धार्थ होटेलमा। बैंकले कमोडिटी मार्केटको सर्वेक्षणका लागि खटाएको थियो पश्चिम नेपालमा।
Sunday, 11 March 2012 14:45	नागरिक
मनोज घर्तीमगर- पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बुद्धिबहादुर थापा उपचारको पर्यायका रुपमा स्थापित छन्। ‘डा. बुद्धिले त छोएकै भरमा बिरामीको आधा रोग निको हुन्छ' सेवा लिन आएकाहरू यसरी उनको प्रशंसा गर्छन्।
Sunday, 11 March 2012 14:35	नागरिक
किशोर नेपाल- कालो रंगको पारदर्शी स्ल्याक्समाथि मिनी हट प्यान्टमा सजिएकी रायना दरबार मार्गमा स्कूटी कुदाउँदै थिई। उसको ध्यान कानमा बजिरहेको गीतमा थियो। मस्त थिई ऊ संगीतको धूनमा। 'अलोन दिस सण्डे...लुकिङ फर समवन...।' दरबारछेउको ट्राफिकमा अचानक घ्याच्च रोकियो उसको स्कूटी।
Sunday, 11 March 2012 14:50	नागरिक
Thursday, 01 March 2012 16:01	नागरिक
बम कनेक्सन, हिसिला र पौडेलसम्म
Thursday, 01 March 2012 15:42	नागरिक
वर्तमान सरकार विचित्रैको छ। राजनीतिक र वैचारिक रूपले विपरीत धुरीमा रहेका विभिन्न समूहले सरकार समर्थनको डोरी समातेका छन्। सरकारमा रहेका धेरैको पृष्ठभूमि प्रवृत्ति र कनेक्सन आपराधिक छ। हाल सिंहदरबारको मुटुकै छेउमा बम पड्काउने देवराज लामा प्रधानमन्त्रीकी पत्नी हिसिला यमी र राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलसँग जोडिन पुगेका छन्।
थ्यांक यू इलाम, लभ यू मच
Thursday, 01 March 2012 15:40	नागरिक
किशोर नेपाल- खुसीले चहकिएकी थिई विनिता। विनिता खुसी हुनु नौलो कुरा थिएन। ऊ खुसी नहुनु बरु नौलो हुन्थ्यो। खुसी हुनैका लागि जन्म भएको थियो उसको। कन्यामको डाँडामा पाइला टेक्नेबित्तिकै विनिता प्रकृतिको आकर्षणमा चुर्लुम्म डुबेकी थिई। चियाबारीको इन्द्रधनुषी नक्साभित्र हराएकी थिई, मन्त्रमुग्ध! उसले यति रमाइलो ठाउँ अहिलेसम्म कतै देखेकी थिइन।
बिहान बिहानै मूड खराब !